Chin'ono naVaNgarivhume Vanobudiswa Mujeri Mushure Mekubvisa Mari yeChibatiso
Gunyana 03, 2020
Hopewell Chin’ono's and Ngarivhume Leaving Chikurubi
Mutori wenhau Hopewell Chin’ono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe, VaJacob Ngarivhume, vapihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro mushure mekugara mujeri kwenguva inoda kusvika kusvika kumwedzi miviri.
Chin’ono, uyo anga ava nemazuva makumi mana nematatu ari mujeri, abvisiswa zviuru gumi zvemadhora, ukuwo VaNgarivhume, avo vanga vava nemazuva makumi mana nemashanu, vabvisiswa zviuru makumi mashanu zvemadhora emaRTGS.
Vachitura mutongo pachikumbiro chaChin’ono chekuti atongwe achibva kumba, VaTawanda Chitapi vati dare ramejasiriti rakakanganisa pakusaona kuti musi wa31 Chikunguru wakange washevedzerwa kuratidzira wakange wadarika pakaenda Chin’ono kudare iri achiti pane zvashanduka kubva paakambonyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare iri.
VaChitapi vati Chin’ono abhadhare mari inoita zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS uye kuti asiye magwaro emba yake, azvipire kumapurisa kaviri pasvondo, asiye pasipoti yake kudare uye kuti asaende padandemutande rake reTwitter.
Rimwe remagweta aChin’ono, VaGift Mtisi, vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevatapi venhau reMisa Zimbabwe, VaTabani Moyo, vati zvanzi nedare Chin’ono asaende paTwitter, zvinotyora kodzero dzake.
Vachiturawo mutongo wakanyorwa naVaSiyabona Musithu, VaChitapi vati VaNgarivhume vabhadhare madhora zviuru makumi mashanu kana kuti $50,000 ari maRTGS, vasiye pasipoti yavo kudare ramejasitiriti, vazvipire kumapurisa katatu pasvondo uye vagare kumba yavo yekuWaterfalls kudzamara nyaya iyi yapera.
Gweta raVaNgarivhume, VaMoses Nkomo, vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare kunyange hazvo zvakatora nguva yakareba kuti VaNgarivhume vasunungurwe kubva pavakasungwa musi waChikunguru 20.
Zvichakadai, mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, vati mitongo yaturwa nedare nhasi inoratidza kuti matare emunyika anoshanda akazvimirira.
Chin’ono naVaNgarivhume vari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji munyika kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi waChikunguru 31. Vaviri ava vakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kaviri nedare ramejasitiriti uye kamwe chete nedare repamusoro vasati vapihwa mukana uyu nhasi.
Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare kuMasvingo, hurumende inonzi yabvisa imwe nyaya panyaya mbiri dzanga dzichipomerwa kanzura weMDC Alliance, Va Godfrey Kurauone, avo vari muchitokisi kwenguva inodarika mwedzi.
Nyaya yaraswa ndeyekuimba kwavanonzi vakaita vachizvidza mutungamiri wenyika.
Gweta riri kumirira VaKurauone, VaMartin Mureri, vati VaKurauone vari kudzokera zvakare mudare mangwana apo pari kutanga kutongwa nyaya yavari kupomerwa yekuvhiringidza kufamba kwevanhu pamwe nedzimotokari.
Vanotengesa Mumigwagwa Vodzokera kuMabasa Avo
Nyanzvi Dzinoti Kumbovharwa kweNyika Koburitsa Pachena Kuti Zimbabwe Haina Hurongwa heKubatsira Varombo